Nandrolone Propionate Raw ihe ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya - Fọrọ
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3)
Nandrolone Propionate ntụ ntụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ike anabolic-androgenic steroid dị na ahịa. Ndị na-ewu ụlọ na ndị na-eme egwuregwu na-eji ya iji nwekwuo ike na ume.
Nandrolone Propionate Material Raw (7207-92-3) video
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) Nkọwa
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu injectable steroid. Ọ na-ewu ewu ma eleghị anya n'ihi eziokwu ahụ bụ Nandrolone Propionate Raw material na-egosipụta ịrịba mmetụta anabolic na mmetụta ntakịrị androgenic mmetụta. Nandrolone Propionate bụ ngwọta dị irè nke na-arụpụta àgwà, uru nke anụ ahụ na-adịte aka, nke a bụ n'ihi obere ndụ nke ọgwụ (gburugburu 8 ụbọchị).
Nandrolone Propionate A na - eji ihe onwunwe eme ihe maka ọrịa na - adịghị ala ala, oké ọkụ, tupu mgbe a gwọchara ya na - agwọ ọrịa na osteoporosis, nke akaghi aka na nke a na - eme maka ụmụaka, nakwa maka ọrịa cancer na - enweghị ike ịgwọ ọrịa na - nke anaemia, breastcinoma breast, epioedema weghaara, antithrombin III deficiency, excess fibrinogen, ọdịda ọdịda na Turner si syndrome na prophylaxis nke ekere òkè angioedema.
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) Smmezi
Product Name Nandrolone propionate Ihe onwunwe
Chemical Aha 17-PROPIONATE; NANDROLONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE PROPIONATE;17-beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-propionate;19-NORTESTOSTERONE 17-PROPIONATE;19-NORTESTOSTERONE PROPIONATE
molekụla Fnhazi C21H30O3
molekụla Wasatọ 330.46
Mgbu Point 55-60 Celsius
esi ebe 453.6 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ gburugburu 8 ụbọchị
Agba ọcha crystalline
Antinye Nandrolone propionate A na-eji ihe onwunwe eme ihe maka ọrịa na-adịghị ala ala, oké ọkụ, tupu ịwachaa mgbe a gwọchara agwọ ọrịa na osteoporosis, nke akaghi aka na nke umuntakiri maka ụmụaka, nakwa maka ọrịa cancer na-enweghị ike ịgwọ ọrịa na-agba ọbara nwa eriri afọ fibroid.
Kedu ihe onwunwe Nandrolone Propionate Material (7207-92-3)?
Nandro Nandrolone Propionate bụ otu n'ime ndị maara nke ọma ụbụrụ nke anabolic nke ndị na-ewu ụlọ na ndị na-eme egwuregwu na-eme ka ike na ume sikwuo ike. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eji steroid a mee ka enwekwu ike na ike. Nke a na-ahụkarị steroid n'ụdị ụdị injectable.
Ọ bụ a19-ma ọ bụ anabolic androgenic. E meela ka ọ gbanwee ka o wee mee mgbanwe na testosterone. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị na-emepụta testosterone na ụbụrụ anabolic ka ukwuu ma ọ bụ ụda androgenic dị ntakịrị. Ọ bụ ihe a na-ejikarị eme ihe dị ka steroid a na-ebelata DHN mgbe ndị ọzọ steroid na-ebelata DTH.
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) na-arụ ọrụ
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) ka a tụlere ọtụtụ ndị steroid kachasị mma maka nwoke iji Nandro (Nandrolone Propionate Raw material) na-agbanyekarị ugboro anọ na ugboro ise kwa izu. Na ego a, mgbanwe nke estrogen bụ obere ka gyno enweghị nsogbu. Maka nhazi nke anụ ahụ, Nandro (Nandrolone Propionate Material) nwere ike ịmepụta ya n'ụzọ dị irè na machibido cycles.Ọ dị mfe na imeju na-akwalite nha dị mma na ike nweta mgbe ọ na-ebelata abụba ahụ.
Ihe Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) Ụdị
Nandrolone Propionate dị na ụdị injectable. Ọ bụ ya mere ọ na - eji ewe oge iji mee ka ọ dịkwuo njọ. Ọ na-ewe banyere 2 ka izu 3 maka nchọpụta. N'ihi ya, a na-atụ aro ka ịkwụsị inye Nukrolone Propionate Twoto izu atọ tupu asọmpi ọ bụla ma ọ bụ egwuregwu ebe ọnwale nchọpụta ọgwụ nwere ike ime. Dị ka ọgwụgwọ ọ dị mkpa, eji ya dị ka 100 na 200mg kwa izu iji mesoo ọrịa anaemia na ọrịa ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-eji 300 mee ihe na 400mg kwa izu maka nsonaazụ kacha mma.
Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) ntụ ntụ Na-eji
Ndị na-ewu ụlọ na ndị na-eme egwuregwu na-eji Nandrolone Propionate eme ka ike na ume sikwuo ike. A na-egosikwa ya maka ọgwụgwọ ọrịa anaemia, breastcinoma ara, ọrịa angitrombin III, ihe nrịba nke ụbụrụ, ọdịda ọdịda na ọrịa Turner na prophylaxis nke ọrịa angioedema.
Zụta Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3) si Buyaas.com
1 nyochaa maka Nandrolone Propionate Ihe onwunwe (7207-92-3)
Ihe NANDROLONE PRODUCTION dị ezigbo uru.